Jubbaland oo Amaro ku soo Rogtay Hayadaha ka howl-gala Kismaayo – Radio Daljir
Jubbaland oo Amaro ku soo Rogtay Hayadaha ka howl-gala Kismaayo
Nofeembar 27, 2015 4:18 b 0
Somalia, November 27, 2015-(Daljir)_Madaxwaynaha mamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe ayaa maanta xarunta madaxtooyada Kismaayo shir ugu qabtey Hayâ€™addaha kala duwan ee ka howlgala Jubbaland kuwaasoo caalami iyo maxal isagu jira.
Kulankan oo muhiimadiisu ahayd ogaanshaha hayâ€™addaha Jubbaland ku sugan waxay qabtaan ayaa waxaa madaxwayne Madoobe ku weheliyay qaar ka mid ah wasiiradiisa.
Wakiillo ka socday inta badan hayâ€™adaha ka howlgala deegaannada Jubbaland oo kulanka joob joog ka ahaa ayaa inta uu kulanku socday waxay soo bandhigeen waxqabadkooda.
Markii kulanku soo dhammaaday ayaa waxaa Telefishinka Jubbaland uga warbixiyey waxyabahii looga hadlay iyo natiijada ka soo baxday Guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Goonni iyo wasiirka qorsheynta Jubbaland Maxamed Nuur Shambara.
Kulanka dhex maray masuuliyiinta Dowladda Jubbaland iyo wakiilada ka socday hayâ€™adaha ka howlgala deegaannada Jubbaland ayaa waxa uu qayb ka yahay dedaallada ay Dowladdu ku xaqiinjinaysa waxqabadka hayâ€™adaha.
Qaramada Midoobay oo ka Hadashay Dooni lagu Afduubtay X.Somalia
RW Somalia oo Cadaado soo Gaaray